“Sorohy ny Hetsika Ivelan’ny Trano” – Nahatratra Ny Taha Avo Indrindra Ny Rivotra Maloto Any Beijing · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2013 2:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Svenska, 日本語, русский, Italiano, English
Tsy vaovao amin'ny fahalotoan'ny rivotra intsony i Beijing, fa hafa mihitsy ny tamin'ity indray mitoraka ity. Setroka mavesatra nitarazoka be nandritry ny 4 andro miaraka amin'ny fanazavana ara-maoraly ny fipitipitin'ny loto no namely ny renivohitra Sinoa tamin'ny tapatapaky ny volana Janoary, niteraka lohatenim-baovao lehibe ary nampanonjanonja ny vondom-piarahamonina iray tety anaty aterineto izay nanjary lasa niha-nahery feo mikasika ny olana ara-tontolo iainana.
Nandentika ny tanàna tanatina zavona mavesatra ny rivotra maloto ary nampihena ny fahitana. (Sary nalain'i Owen)
Niantso ny vahoaka ny Haino aman-jerim-panjakana mba ho mailo sy hisoroka ny hetsika ara-batana ivelan'ny trano.
Tamin'ny 12 Janoary, nahatratra ny refy ambony izay mampitolagaga ny tondro iray manana ny lanjany momba ny loto-PM2.5, fantatra ihany koa amin'ny hoe piti-javatra kely noho ny 2.5 micrometatra eny amin'ny rivotra. Ny avo indrindra tamin'ny PM2.5 novakiana tamin'io andro io dia maherin'ny 700 mikrogirama isaky ny metatra toratelo, izay antsoin'ny Sinoa maro hoe “manapoaka ny isa fanondro” (famakiana nivoaka tany ivelan'ny sary.)
Amin'ireo piti-javatra rehetra, mino ireo manam-pahaizana fa ny PM2.5 no tena mametraka loza lehibe indrindra mitatao hoan'ny fahasalaman'ny olombelona satria mety ho tafiditra any amin'ny tratra izy ireo. Tena heverina fa zava-doza tokoa ny tondron'ny fahalotoan'ny rivotra ambonin'ny 500. Tanaty fihetsika iray tsy fahita firy, namoaka ny fanairana mavo ny Sampan-draharaha mikasika ny Toetry ny andro any Beijing tamin'ny 13 Janoary, ny fanairana mikasika ny zavona lehibe indrindra nahazo ny tanàna hatramin'izay.
Nitarika ho amin'ny hazakazaka hividianana saron-tava[zh] tety anaty aterineto ny loto mavesatra tany Beijing. Ny fivarotana sasany aza naneho mihitsy fa lany ny saron-tava namidiny.
Nametraka toby fanarahamaso ny PM2.5 miisa 35 i Beijing tamin'ny faran'ny taona teo, mba hampahafantarana tsaratsara kokoa ny vahoaka mikasika ny tahan'ny loton'ny rivotra. Nambaran'ny haino aman-jerim-panjakana foana fa ny tsy fisian'ny rivotra sy ny fitombon'ny fiara mihoampampana nandritra ny taona maro teo an-tanàna no tena nahatonga ny loton'ny rivotra. Nokianin'ny gazety iraisam-pirenena ny olana mikasika ny fanohizana tsy farany ny fitomboana ara-toekarena ataon'ny governemanta sy ny tsy firaharahiany ny fitontongan'ny ara-tontolo iainana.
Nilaza ny ahiahiny mikasika ny fahasalamana tamin'ny Sina Weibo ireo mpisera anaty aterineto:
田源-Jason[zh]: Na dia efa fantatr'izy ireo aza fa tena maloto be ny rivotra iainana, ny arabe sy ny lalan-kely, na ny kely na ny lehibe dia mbola tototra olona maro ihany. Fitenim-paritra maro samihafa no re eny amin'ny fiantsonan'ny lamasinina, ny resaka moa amin'izany saika mifantoka any amin'ny — ny maha-henjana ny fahalotoan'ny rivotra, tsy tokony nankaty ry zareo, nanjary ratsy be i Beijing, ary (ny olona) nanjary taizan'aretina, etc. Ry namana, angamba tokony hiverina any amin'izay niavianao ianao handray anjara ho azy, avelao Beijing renivohitra ho anay!
黄金神棍[zh]: Namelona ny iPad-ny ny zanako vavy ary nahita ny maridrefin'ny loton'ny rivotra teo amin'ny vaovaon'ny toetr'andro. Hoy izy, tena maloto rivotra be i Beijing~ eny hoy aho, ka hiverina izany ianao? Tsia hoy izy, ary nanontany ahy izy hoe fa maninona ny olona no mbola mijanona eto? Hoy aho hoe mitady vola izy ireo, misy ihany koa ireo trano mijoalajoala. Hoy izy, fa azo sitranina ve ny aretina rehefa avy mitady vola? Tsy hitako izay navaly azy. Hoy izy tena marary anie izy ireo e. Indraindray hendry kokoa ny ankizy oharina amin'ny olon-dehibe!
Nanao angoan-tenda ny mpihira pop Sinoa malaza iray[zh]:
Izao no fotoanan'ny rivotra mahafatin'i Beijing… tsy afaka ny hiaro amin'ny fofona ratsy ny saron-tava! Fanina ny lohako! Mangirigiry ny masoko! Tena sahirana mihitsy aho miaina. Izany ny rivotra any Beijing ka inona moa no tadiavinao???? Te-hamadika ny tenanao ho lasa vato ve ianao????
Nisy iray nanafokafoka [zh] momba ny rivotra maloto:
Voalaza izao fa nahatratra 728 ny maripandrefesana PM any Beijing, niditra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny modely Silent Hill izany.
Mpisera iray hafa ety anaty aterineto no nandray ny tantara mitovitovy[zh]:
Beijing tanàna feno setroka. Dia hahatsapa ny tsiron'ny tantara ny Britanika raha mahita an'i Beijing tamin'ny 12 Janoary 2013, sahala amin'ny hoe miverina any Londona tamin'ny taona 1945 izany.
Ny sasany tsy dia nanampy firy[zh]:
Tsy mila mahita ny mari-pandrefesana PM2.5 akory isika, ny orontsika dia efa afaka manimbolo ny havesatry ny loton'ny rivotra, tsy mora ny mitady vola, mbola hanohy hitady izany foana aho na dia misy loza miandry aza ao ambadika ao, tsy hoe tsy manam-pahasahiana aho fa tsy manana safidy!